रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राका बेला किन पर्छ पानी ?
ललितपुर, वैशाख १७ गते- वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पूज्य रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राका बेला किन वर्षा हुन्छ ? धर्म संस्कृतिमा विश्वास गर्नेहरू यसलाई दैविक शक्तिका रूपमा व्याख्या गर्छन् भने वैज्ञानिकहरू नियमित मौसमी चक्रलाई कारण देखाउँछन् ।
मच्छिन्द्रनाथ र वर्षासँगको तादात्म्य के छ ? यो अलौकिक हो वा प्राकृतिक वा वैज्ञानिक प्रणाली यसमा अध्ययन अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् बरुण पौडेलले प्रायः मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा ‘प्रिमनसुन’को समयमा हुने गरेको बताउनुभयो ।
पौडेलका अनुसार ‘प्रिमनसुन’को बेला खण्डवृष्टि हुने, चट्याङ् पर्ने एकैछिन घाम लाग्ने त्यसपछि पानी परिहाल्ने गर्छ । मार्च अप्रिल हुँदै मेसम्म मनसुनको सक्रियता बढ्दै जाने र यो अवधिमा वर्षा हुने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
महाशिवरात्रिका बेला, पखेटा भएका कमिला देखा परेमा र चराचुरुङ्गीले पखेटा फिँजाएर सुत्दा पानी पर्छ भनिन्छ । यस्तै मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा हुँदा पनि पानी पर्छ भनिन्छ यसका विषयमा ज्योतिषीय आधारमा आफ्नै कथन होला तर यी विषय वैज्ञानिक तवरबाट मान्य नभएको जानकारहरूको भनाइ छ । मौसमविद् पौडेलले यी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्यसचिव एवम् पञ्चाङ्गकार ज्योतिष सूयप्रसार्द ढुङ्गेल मच्छिन्द्रनाथको शक्तिले वर्षा हुने गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ थप्नुहुन्छ , ‘मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रामा जहिल्यै पानी परेकै हुन्छ देवताको शक्तिको यथार्थ आजका नवपुस्ताले पनि अनुभव गर्न पाएका छन् यो अलौकिक हो । ’
रथयात्रामा पानी पर्ने नै भएकाले मच्छिन्द्रनाथलाई वर्षा र सहकालका देवता भनेर स्तुति गरिएको हो, रथयात्रा गरिएको हो पानी पर्ने मौसम भनेर यात्रा गरिएको होइन, उहाँले भन्नुभयो । जाउलाखेल जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण महर्जन १२ वर्षसम्म वर्षा नभएर अनिकाल लागेपछि भारतको आसामबाट मछिन्द्रनाथलाई नेपालमा ल्याइएको बताउनुहुन्छ । त्यसपछि जात्राका बेला वर्षा हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
मौसमविद् पौडेलले पृथ्वीको परिक्रमा, आकाशगङ्गा र सौर्यमण्डल लगायतको अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्रै मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राका समयमा किन पानी पर्छ भनेर भन्न सकिने बताउनुभयो । हामीले जानेअनुसार यो हावापानीको हिसाबले प्रिमनसुनको समय हो । ‘ज्योतिषीले रथयात्राको साइत तोक्ने र मौसमविद्ले उसै दिन पानी पर्छ भनेर पूर्वानुमान घोषणा गर्ने गणनाबीच के तादात्म्य होला, यो कौतुहलको विषय हो’, ज्योतिर्विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष ज्योतिषी डा. सुनिल सिटौलाले प्रश्न गर्नुभयो ।
अझै केही दिन वर्षा
मुुलुकभरि अझै केही दिनसम्म पानी परिरहने सम्भावना छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् शान्ति कँडेलले बिहीबारसम्म मुलुकभरि नै मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना बढी रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय वायुसँगै बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा नेपालमा मिसिएका कारण अहिले मुलुुकभरि ‘प्रि मनसुन’ सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । यही कारण पानी परिरहेको बताउनुहुँदै उहाँले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अहिले ‘प्रि मनसुन’ सक्रिय भएको जानकारी दिनुभयो ।